कोरोनाकै कारण मृत्यु भएकि २५ बर्षिया युवतीकाे यस्तो थियो उपचार! – PathivaraOnline
Home > समाचार > कोरोनाकै कारण मृत्यु भएकि २५ बर्षिया युवतीकाे यस्तो थियो उपचार!
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको १६ दिनपछि २५ वर्षीया युवतीको निधन भएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ बाँकेकी २५ वर्षीया दीपा कुँवरको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा उपचारका क्रममा आज निधन भएको हो । दी’र्घरोग वा अन्य स्वास्थ्य स’मस्या नभएको र उनको निधन को कारण कोभिड १९ रहेको उपचारमा सं’लग्न चिकित्सकले बताएका छन् । दीपाको स्थायी ठेगाना धनगढीको स’न्तोषी टोल रहेको छ ।
उनी केहीवर्षदेखि बाँकेको नेपालगञ्जमा बस्दै आएकी थिइन् । भदौ ३० गते स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएको र त्यहीँ दिन भेरी अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना गरिएको थियो । निरन्तर स्वास्थ्यमा ज’टिलता देखिएपछि प्लाज्मा थे’रापी र रे’मडिसिभिर दिएर उपचार थालिएको थियो ।
आज बिहान ११ बजे स्वास्थ्य अवस्था ज’टिल बनेको र भे’न्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको थियो । तर, बेलुकी पौने ५ बजे उनको निधन भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ ।कोरोनाका कारण उनको दुबै सा’इडको फोक्सोमा नि’मोनियाको स’मस्या देखिएको थियो ।
रुपन्देही र बाँकेमा पानीमा डुबेर तीनजनाको ज्यान गएको छ । रुपन्देहीमा खोलामा पौडिखेल्न गएका युवा बेपत्ता भइ खोजीगर्दा मृ’त फेला परेका हुन भने बाँकेमा पोखरीमा पौडिखेल्दा डुवेर निधन भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
रुपन्देहीको रोहिणी खोलामा नुहाउनेक्रममा बिहीबारदेखि बेपत्ता भएका एक युवक शुक्रबार मृतावस्थामा फेला परेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिका वडा न १२ जुटपानी स्थित रोहिणी खोलामा बिहीबार साथीसँगै नुुहाउन गएका १७ बर्षीय राजन पश्चिममा थारु खोलामा डुवेर बेपत्ता भएका थिए ।
बेपत्ता थारुको प्रहरी र स्थानीयले खोजि गर्नेक्रममा आज बिहान मृतावस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । यसैगरी बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका ६ फत्तेपुरस्थित तालमा पौडी खेल्ने क्रममा नेपालगञ्जका दुई किशोरको शुक्रबार निधन भएको छ ।